Garo haddii aad qabto STI | Zanzu
STIyada inta badan ma laha astaamo cad. Had iyo jeer ma arki kartid haddii aad qabto STI. Naftaada ka baadha dhakhtarkaaga guud ama adeeg caafimaadka dad waynaha ee degmadda (GGD) haddii ad doonayso inaad hubsato inaad qabto STI.
Nin la hadlaya xirfad yaqaanka caafimaadka.
Haddii aad qabto mid ka mid ah astaamaha soo socda waxaad qabi kartaa STI:
dheecaan sii dayn ka yimid kaadi mareenka. siilka ama futada (jaalle, cagaar, bunni ah, uraya ama dhiig leh). Caadi ahaan waa caadi in dheecaan ka yimaado siilka (dheecaanka siilka). Haddii dheecaanku aad u uro ama midabku isbeddelo, waxay noqon kartaa astaanta STI.
isbeddelada maqaarkaaga: maqaarka biyahu galay, burooyinka, boogaha ama dheecaanada/ gudaha/ hareerta guska, siilka, futada ama afka /hunguriga;
xanuun iyo/ ama dareen gubasho ah marka aad tagto musqusha;
cuncunka guska, siilka, futada ama shicrada;
dhiig baxa ama xanuunka caloosha marka la samaynayo galmo (gelinta);
xanuunka mid ama labbada xiniinyood (raga);
dhiig ku jira saxaradaada.
Astaamaha qaar haweenku leeyihiin (dheecaan sii dayn, cuncunka siilka, gubasho dareen marka la kaajayo) waxaa sababi karo labba caabuqyo fangas leh: fangaska dulinka ama bakteeriyada siilka.
Galmo ahaan ma gudbaan (maaha STI yada) Waxaa loogu yeedhaa caabuqyada siilka.
Waydii dhakhtarkaaga guud wixii talo ah.
Astaamaha STI waxay qorsoomaan addoo weli qaba STI. Weli waxaa du baahan doontaa in lagu daweeyo. Badanka STI yada waa la daweeya ama astaamahooda waa la dawayn karaa.
Caaqibo ahaan dawayn la'aanta STI waxay noqon kartaa inay dhib kaa qabsato uuraysiga (rimis la'aan).
STI yadu waxay sidoo kale yeelan karaan cawaaqib khatar ah oo caafimaadkaaga ah haddii aan la dawayn. Waydii dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadka dad waynaha ee degmadda (GGD) wixii talo ah.
Jouw GGD - Adeegaaga caafimaadka degmada ee dad waynaha
Haddii aad ka yartahay 25 oo aad qabto su'aalo ku saabsan caafimaadka, galmada, jidhkaaga, dareemada, khamrada ama maandooriyaha waxaad ku waydiin kartaa iimayl ama wada sheekaysi qoraal onlayn ah.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Garo haddii aad qabto STI